Swel Daw Yeik – HlaMin
Category: Swel Daw Yeik
Update : December 11, 2021 စွယ်တော်ရိပ် ဖောင်ဒေးရှင်း စက်မှုတက္ကသိုလ်ထွက် (နည်းပညာတက္ကသိုလ် များအားလုံး အပါအ၀င်) အင်ဂျင်နီယာတို့၏ ဆရာအိုများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သည့် စွယ်တော်ရိပ် ဖောင်ဒေးရှင်း…… စိတ်စေတနာ နှင့် သဒ္ဓါတရား အရင်းခံ၍ ရပ်ဝေးရပ်နီး မှ လှူဒါန်းလိုပါက …… ဆက်သွယ်ရန်…… ရန်ကုန် ။ ဦးဝင်းထိန်ဦး (Mech 72) 095170399 မန္တလေး ။ ဦးတင်လတ် (Mech 85) 092044382 နေပြည်တော် ။ ဦးဝင်းနိုင် (Civil 80) 095014942 စင်ကာပူ ။ ဦးဇော်ထွန်းနိုင် (Aero […]
Update : December 11, 2021 Posting by U Tin Latt (M85) စွယ်တော်ရိပ် ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာ RIT ကျောင်းသားဟောင်းတွေက သက်ဆိုင်ရာ မေဂျာအလိုက် ဆရာကန်တော့ပွဲတွေ အခါအားလျော်စွာ လုပ်ကြတယ်။ ဆရာတစ်ယောက် နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်ရင် သိတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေကတဆင့် နီးစပ်ရာ ကျောင်းသားဟောင်း အသိုင်းအ၀ိုင်းက တတ်နိုင်သလောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်မေဂျာက ဘယ်ဆရာ ဆေးရုံတက်တက် ကူညီစောင့်ရှောက်မယ်လို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တော့ မရှိခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၃ မှာ အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ နေတဲ့ RIT က ဆရာ တစ်ယောက် အိပ်ရာထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားတယ်။ […]
Update : December 11, 2021 The idea of Swel Daw Yeik Foundation (SDYF) was proposed by Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) to his former students (mostly who were RIT Ah Nu Pyinnya Shins) before, during and after SPZP-2012. SDYF was established in 2013 with core volunteers […]
Update : December 11, 2021 The monthly meetings of Swel Daw Yeik Foundation (SDYF) were mostly held at the house of U Khin Maung Tun (President). Some attendees make donation to SDYF at the meetings. U Khin Maung Tun has led by example to ensure that SDYF will […]
Swel Daw Yeik (1)
Update : December 11, 2021 Saya U Moe Aung wrote : စွယ်တော်ရိပ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်သည်ထက် အောင်မြင်နေရခြင်းမှာ စက်မှုတက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် များမှ ဘွဲ့ရ အင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ တို့၏ ငွေကြေးလှူဒါန်းပံ့ပိုးမှု၊ ကူညီအားပေးမှု၊ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အားလုံး၏ ကိုယ်ကျိုးမဲ့ စွမ်းဆောင်မှု စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။အားလုံး၏ ကိုယ်ကျိုးမဲ့ စွမ်းဆောင်မှု စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ [ ဆက်လက်၍ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြပါရန် ဆော်သြအပ်ပါသည် ] Editor’s Notes : […]
Update : October 20, 2021 2012 Before, during and after SPZP-2012, informal and formal discussions led by Saya U Moe Aung (Tekkatho Moe War) on forming Swel Daw Yeik Foundation (SDYF) took place. At that time, there was no formal Alumni Association. SDYF’s primary objective was to help […]
Update : October 20, 2021 Thanks to Saya U Moe Aung (Patron) — for championing SDYF and also for disseminating the SDYF news — and to everyone who helped transform the SDYF vision into reality inaremarkably short time. As Saya U Moe Aung often mentioned, there […]
Song for SDYF
Update : October 20, 2021 Lyrics : Tekkatho Moe War (Saya U Moe Aung) Melody : Ko Than Po (M75, Swel Daw Yeik) Vocal: Ye Myint Soe (Mya Myint Moh) “စွယ်တော်ရိပ်ဖေါင်ဒေးရှင်း” ရေး တက္ကသိုလ်မိုးဝါ သံစဉ် သန်းပို(စွယ်တော်ရိပ်) ဆို ရဲမြင့်စိုး(မြမြင့်မိုရ်) ဘ၀လမ်း……..မှာ၊ လျှောက်လှမ်းနေဆဲ..ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ဆရာသခင်……..၊ ရတက်မီး..အသက်ကြီးလေမှမလောင်စေချင်၊ ထိုအခင်း အိုမင်း မယိုယွင်းခင်၊ ကိုယ်ကျန်းမာရေး..နဲ့ ၊စိတ်ချမ်းသာရေးကို […]
U Khin Maung Tun U Khin Maung Tun Health Care Committee Financial Assistance to eligible sayas Medical Check up in 2018 Khin Htay Lin and May Nge Support for U Kyaw Sein (M65) Support for U Ohn Maung (ChE68) Pre-AGM Meeting in 2018 Before, during and after SPZP-2012, […]